We Fight We Win. -- " More than Media ": အမိမြေ သို့ - အပိုင်း ( ၆ ) “ Remaining Challenges on Reform Process ”
အမိမြေ သို့ - အပိုင်း ( ၆ ) “ Remaining Challenges on Reform Process ”
“အမိမြေ သို့” Golden Moon ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် ကို Comcast Channel 57 နှင့် Verizon Channel 27 ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများကနေ အပိုင်း လိုက် တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်နေပါသည်။
ဒီ အပတ် အစီအစဉ် မှာ လက်ရှိ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဖြစ်စဉ် မှာ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိမ်ခေါ်မှုများ ကို အမိမြန်မာပြည် ကို ပြန်လည် သွားရောက် လည်ပတ် ခဲ့ တဲ့ ကိုမြတ်စိုး က သူ့ရဲ့ အမြင်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အပိုင်းလိုက် လေ့လာ သုံးသပ်ဆွေးနွေး တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရာစုနှစ်များစွာ အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ အဓိက ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စိမ်ခေါ်မှုတွေ က တော့-
Remaining Challenges on Reform Process
1) Poor leadership in many sectors because of the large-scale emigration ofalarge group of individuals with technical skills or knowledge .(Poor Leadership means poor judgment. Poor judgment means poor decision making. Poor decision making means poor implementation on reform process and slow on infrastructure developments.
2) Failure of education system in Burma for many decades.
("If you can't compete in the class-rooms, how can you compete in the real world.")
3) Lack of Exploring the Bases of Institutional Reforms and Structural Reforms in New Democracy.
4) Lack of Social Stability and BuildingaStrong Middle Class.